တစ်ဦးကလက်တော့တစ်ခုသို့မဟုတ် PC ကို (ကွန်ပျူတာ): အဆိုပါအကောင်းအဆိုး cons | TeraNews.net
တစ်ဦးကလက်တော့တစ်ခုသို့မဟုတ် PC ကို (ကွန်ပျူတာ): အကောင်းအဆိုး cons
စာရေးသူ TeraNews Published 13.03.2019
ကျနော်တို့ကရှေးခယျြမှုများ၏ရှေ့မှောက်၌ရပ်တန့်: အလက်ပ်တော့သို့မဟုတ် PC? သင့်ရဲ့အချိန်ဖြုန်းမနေပါနဲ့ - ဆောင်းပါးကိုဖတ်ရှုခြင်း, သင်ချက်ချင်းဝယ်ဖို့အဘယ်အရာကိုဆုံးဖြတ်။
လက်ပ်တော့သို့မဟုတ် PC: အသုံးပြုထားတဲ့
စတိုးဆိုင်ကနေစကားစပ်များတွင်ရေနံတူးစင်ကိရိယာများသို့မဟုတ်အသစ် - ဝယ်ရွေးချယ်ဖို့။ တစ်ခုတည်းသောခြားနားချက်စျေးနှုန်းဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပွငျသိသာထင်ရှားသော - လက်ပ်တော့သို့မဟုတ်ကွန်ပျူတာ Bu 2-3 ကြိမ်အသစ်တစ်ခုကိုတဦးတည်းထက်စျေးနှုန်းချိုသာကုန်ကျခဲ့ပါတယ်။ သို့သော်ကျိုး၏% အခွင့်အလမ်းရှိပါတယ် 50 ။ အဘယ်သူမျှမအာမခံရောင်းချသူမိမိတို့၏ကိုယ်ပိုင်စရိတ်မှာပစ္စည်းကိရိယာများ၏ပြုပြင်ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်အကျိုးကျေးဇူးအလွန်ဝိုးတဝါးပုံရသည်။
ပွောငျးရှေ့လှယျခွငျး။ အသေးစားအရွယ်အစားနှင့်အလေးချိန်, display ကို၏ရှေ့မှောက်တွင်, စပီကာ, မိုက်ခရိုဖုန်းတစ်ခုရိုက်သွင်းရေးကိရိယာ (touch pad က, ကီးဘုတ်), Self-စွမ်းအင်သုံးနှင့်ကြိုးမဲ့ကွန်ယက် access ကို။ အဆိုပါ Laptop ကိုအဆက်မပြတ်အိမ်နှင့်အလုပ်အကြားရွှေ့ဖို့ရှိသည်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းခရီးသွားများအတွက်စံပြဖြစ်ပါတယ်။ ပန်းခြံ, ကော်ဖီဆိုင်, ရုံး, ခရီးသွား - မိုဘိုင်းကွန်ပျူတာမရှိမဖြစ်ဖြစ်လိမ့်မည်။ အိမ်မှာက, laptop ကိုစားပွဲပေါ်ရာအရပျယူမထားဘူး။ ကေဘယ်လ်ကြိုး၏ပြီးပြည့်စုံမရှိခြင်းအိမျတျောကိုလှည့်ပတ်ပစ္စည်းကိရိယာများရွှေ့ဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ Laptop ကိုစံပြဖြေရှင်းချက် - မိဘများအတွက်။
functional။ laptops ယာဉ်မောင်းနှင့် software နှင့်အတူ လာ. , မကြာခဏက Windows operating system ကိုအတူ။ ငါ button ကိုနှိပ် - နှင့်သင်သည်သင်၏ Desktop ပေါ်မှာလိုအပ်သမျှ။ ရရှိနိုင်ပါက USB နှင့်ဗီဒီယို output ကို, မိုဘိုင်းကိရိယာ၏လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုချဲ့ထွင်။ လွယ်ကူစွာတစ်ဦးမော်နီတာသို့မဟုတ်တီဗီအစုံ, ပြင်ပကီးဘုတ်, မောက်စ်, ပရင်တာ, စကင်နာ, ဖက်စ်ချိတ်ဆက်ပါ။ လက်ပ်တော့, ဆန္ဒရှိလျှင်, Wi-Fi ကိုအပျေါအငျတာနကျဖြန့်ဖြူးပေးနိုင်မယ့် Router က, သို့ကူးပြောင်း။
ဝတ်ဆင်ရန်မလုံလောက်ခုခံ။ အဆိုပါမှတ်စုစာအုပ်ကိုအလွယ်တကူပျက်စီးနေသည်: တစ်စက်, အရူးအမူး, ထိုအရည်အဖျော်ယမကာသွန်းလောင်း။ ဘက်ထရီအလွဲသုံးစားလျှင်, စွမ်းရည်ဆုံးရှုံးသည်တနှစ်အဘို့ဝတ်ဆင်။ built-in system ကိုအအေးခံစံပြမဖြစ် - ထိုအပေါက်တွေဖုန်မှုန့်မှတဆင့်စာရိုက်, laptop ကို overheats ကြောင့်ပင်ကိုမီးရှို့နိုင်ပါတယ်။
ခေတ်မီဖို့အနိမျ့အလိုက်အထိုက်နေတတ်။ လျင်မြန်သွက်လက် SSD ကို drive ကိုထားမှတ်ဥာဏ် add - ဒါကြောင့်အလုပ် Laptop ကိုအရှိန်မြှင့်ရန်အိုင်တီအကြံပြုသည်။ သို့သော်နောက်ပိုင်းတွင်, စစ်ဆင်ရေး၏ 3-4 နှစ်မေးခွန်းများနှင့်တင်းကျပ်စွာမိုဘိုင်းကိရိယာ၏သားဘုတ်မှရှိတာပါသောဂရပ်ဖစ်ကဒ်နှင့်အတူ Processor, အံ့သောငှါထ။ တစ်ခုသာ Laptop ကိုအစားထိုး - မဟုတ်ရင်စွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်ကောင်းမွန်လာလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကွန်ပျူတာများ (PC များ): အကျိုးကျေးဇူးများ
တစ်ဦးတတ်နိုင်စျေးနှုန်းမှာဒီဇိုင်နာ။ ကွန်ပျူတာကိုအလွယ်တကူအသုံးပြုသူတာဝန်အားဖြင့်ရွေးချယ်ထားကြသည်။ ဆည်းကပ်ရွေးကောက်ပွဲအချိန်အထိသို့မဟုတ်ဂိမ်း။ PC များအဘို့အပိုပစ္စည်းအပြန်အလှန်ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်, ဒါကြောင့်ခေတ်မီ၏မေးခွန်းကိုလည်းဖယ်ထုတ်ပစ်သည်။ ကျေးဇူးပြုပြီး, အိုးအိမ်အသေးစား - သင်သည်သင်၏ Desktop ပေါ်မှာအာကာသကယ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ မူကွဲထောင်ပေါင်းများစွာ၏။
ဝန်ဆောင်မှု။ အလုပ်, ပြဇာတ်, ဒါမှမဟုတ်တစ်ခုလွယ်ကူသောကြီးမားတဲ့မော်နီတာရှေ့မှာကုလားထိုင်အတွက်ဝက်ဘ်စာမျက်နှာရှုမြင် - နှစ်သိမ့် PC များ၏တိုက်ရိုက်သက်သေ။ အဆိုပါကွန်ပျူတာချိတ်ဆက်မာလ်တီမီဒီယာထုတ်ကုန်၏စည်းကမ်းချက်များ၌များများစားစားအလုပ်လုပ်တဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ ဖုန်မှုန့်သို့မဟုတ်အပူ - တစ်ဦးအယူအဆမှာ PC (တစ်နှစ်သို့မဟုတ်နှစ်ခုတစ်ချိန်က 1) မှမြေမှုန့်ပျက်ကွက်, အချိန်မီသန့်ရှင်းရေးဖြစ်ပါတယ်။
ထုကြီးသော။ monitor, စနစ်ယူနစ် - ပျက်ကွက်မှုအတွက်အိမ်မှာအထူးကုခေါ်ပါရန်ရှိသည်။ သငျသညျပြန်လည်ချိတ်ဆက်တဲ့အခါမှာဒီလိုမှမဟုတ်ရင်ယင်းပလပ်နှင့်အတူပြဿနာများရှိပါလိမ့်မယ်။ စားပွဲတစ်ခု, တစ်ဦးကုလားထိုင်တစ်ခုလျှပ်စစ်ထွက်ပေါက်နှင့်အင်တာနက်ချိတ်ဆက်များအတွက်ထောက်ပံ့ရေး cable ရဲ့ရှေ့မှောက်တွင် - ကျနော်တို့လုပ်ငန်းခွင်မှာဂရုစိုက်ဖို့ရှိသည်လိမ့်မယ်။
ကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်ရေးမရှိခြင်း။ Wi-Fi ကွန်ရက်သို့မဟုတ်3/ 4G ချိတ်ဆက်ရန်, သင်သင့်လျော်သောကိရိယာများဝယ်ယူရန်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ကွန်ပျူတာအသုံးပြုသူအလုပ်ခွင်မှချည်နှောင်။
အောက်ခြေလိုင်း: တစ်လက်ပ်တော့သို့မဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကွန်ပျူတာ (PC ကို)?
ဂိမ်းများအတွက် - ကျိန်းသေပုဂ္ဂိုလ်ရေးကွန်ပျူတာ။ upgrade လုပ်ဖို့ပိုမိုလွယ်ကူ, အပူနှင့်အတူအဘယ်သူမျှမပြဿနာတွေရှိပါတယ်။ ထိုအ 4-5 နာရီပေါ်မှာထိုင် ရမ်းပြီးရန်သူများကို သို့မဟုတ်အများကြီးပိုအဆင်ပြေမယ့် Laptop ကိုထက်, အင်ပါယာကိုခုခံကာကွယ်။
ပိုကြိုက် ပွောငျးရှေ့လှယျခွငျး - တစ်ခုသာလက်တော့။ အဖုံးကိုပိတ်လိုက်ပြီးတစ်ဦးကဖီးသို့မဟုတ်ရုံးမှာပြောင်းရွှေ့ - အိမ်မှာအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဘက်ထရီအားသွင်းတခုတခုအပေါ်မှာမျက်စိစောင့်ရှောက်ဖို့မေ့လျော့မနေပါနဲ့။ အကြံပြု 2-3 အားသွင်းမဝယ်: နေအိမ်, ရုံးနှင့်ကားတစ်စီးအားသွင်းသည်။
ကွန်ပျူတာကိုရှာဖွေ မိဘများအတွက် - မှတ်ချက်စာအုပ်။ အားလုံးဆက်သွယ်ရေး, မိုဘိုင်း, နှင့်အသုံးပြုမှုလွယ်ကူ။ သက်ကြီးရွယ်အိုများအတွက် touchpad ကိုချစ်ကြည်ရေးမဟုတ်သည်အတိုင်း, အဆင်ပြေမောက်လေးလည်း။
ကလေးတွေ ပိုကောင်းမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကွန်ပျူတာကိုဝယ်ခြင်းငှါ။ စနစ်ယူနစ်အစိတ်အပိုင်းများမှ upgrade နှင့်တပိုင်တနိုင်ပစ္စည်းကိရိယာများ၏ဘဝအသက်တာရှည်မည်ဖြစ်သည်။
Teclast TBolt 10 - အေးမြတဲ့ပစ္စည်းပစ္စယပါတဲ့လက်တော့ပ်
Framework Laptop - ဘာလဲ၊ ဘယ်လိုအလားအလာတွေလဲ
Asus Chromebook Flip CM300 (laptop + tablet) သည်လမ်းပေါ်တွင်ရောက်နေပါပြီ
ASUS Sky Selection2Ryzen 5000 ဂိမ်းလက်တော့ပ်
GeForce RTX 30xx ဂရပ်ဖစ်ကတ်များနှင့်လက်ပ်တော့ - Asus နှင့် MSI